Nyaya yeVashandi Vasingafanire Kunge Vachiita Basa Yonetsa Makurukota
Chikunguru 08, 2011
Hurumende yemubatanidzwa iri kuenderera mberi ichinetsana zvikuru nenyaya yekuti poitwa sei nenyaya dzemihoro yevashandi vehurumende.
Bato reZanu-PF rinonzi riri kuramba kutambira gwaro rakaitwa nekambani yeErnest and Young yeku India iyo yakabuda neongororo yekuti pane vashandi vari kubhadharwa asi vasingafanire kuve vachibhadharwa nehurumende kana kuti ghost workers, vakawanda vanonzi vari kubazi rezvevechidiki.
VeMDC-T vanoti vashandi ava vanogona kusvika zviuru makumi manomwe, asi veMDC-T vanoti vanosvika zviuru gumi nezvitatu chete.
Ongororo yaComptroller and Auditor General yakaburitsawo kuti yakawana vanhu vanosvika zviuru gumi vakapinzwa basa nenzira isiri iyo mubazi revechidiki.
Sangano reInternational Monetary Fund rinoti pane vanhu vanosvika zviuru gumi nezvina vasingafanire kunge vari pabasa asi panezve zviuru makumi mana nezvishanu vasina kunyatsopinzwa basa zvakanaka. IMF inotiwo hurumende ngaigadzirise nyaya iyi.
Gurukota rezvevashandi vehurumende, VaEliphas Mukonoweshuro, vanoti hachisi chokwadi kuti ongororo yevashandi vehurumende yakaramba kutambirwa nedare remakurukota. Vati dare rakaumba chikwata chemakurukota anosanganisa bazi redzidzo, hutano nerematunhu kuti aongororezve gwaro remamiriro evashandi vehurumende vozodzokazve kudare.
Vati vachataura nezvemari dzevashandi svondo rinouya. VaMugabe vanoti gurukota rezvemari, VaTendai Biti, ngavashandise mari inosvika US$165 million yakabva kuIMF sechikwereti. Asi VaBiti vanoti mari iyi haikwane.
Vanoti vakawedzera vashandi mari mwedzi uno, zvinoreva kuti mari yevashandi inenge yawedzera ne US$29 million mwedzi uno kusvika pa US$109 million asi iyo hurumende ichiwana US$75 million chete pamwedzi.
Vati pakazowedzerwa mabhonasi nezvimwe, mari yevashandi pamwedzi inenge yosvika US$204 million kutanga muna Zvita.
Gurukota rezvevechidiki, VaSaviour Kasukuwere, varamba mashoko ekuti vane vanhu vakawanda vasingafanire kunge vari pamabasa vari kubazi.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, Doctor Godfrey Kanyenze, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti hurumende ngaibvise vashandi vasingafanire kunge vari pabasa ava kuti ikwanise kuwedzera mari.
Hurukuro naVaSaviour Kasukuwere